Igumbi elitofotofo nelisandul 'ukulungiswa - I-Airbnb
Igumbi elitofotofo nelisandul 'ukulungiswa
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguJeffrey
UJeffrey unezimvo eziyi-61 zezinye iindawo.
Indlu esandul 'ukulungiswa yakudala eyi-30 yentsapho yaseDutch kwisitrato esitofotofo kunye nommelwane. Indlu ijonge empuma kunye negadi ejonge entshona, okuthetha ilanga elininzi. Le ndlu inemigangatho emithathu kwaye idibanisa ubutofotofo bale mihla njengemigangatho efudumeleyo kunye nezinto ezinokusetyenziswa ezintsha kunye nobuhle bezinto zakudala kunye neenkcukacha.
Le ndlu inegadi entle ejonge entshona, entle kakhulu ukuba ungahlala kuyo emini nasebusuku ebudeni beentsuku ezifudumeleyo.
Igumbi leendwendwe lifumaneka kwigumbi eliseluphahleni, kwicala elipholileyo elisempuma lendlu. Oku kuthetha ukuba kusasa kukho ilanga eliqaqambileyo nelanga xa uvula iikhethini, kodwa ngokuhlwa nobusuku obutofotofo. Igumbi libonakala linamagumbi aliqela ngenxa yegumbi lokulala elinefestile. Igumbi londwendwe lilungiswe ngokupheleleyo ngo-2021 ibe linazo zonke izinto onokuzisebenzisa ozidingayo. Eli gumbi linobuhle obukhethekileyo nobakudala ngenxa yeminyango emibini ekwigumbi lokulala elithatha indawo yodonga lweendwendwe. Ebudeni beentsuku zasebusika ezibandayo unokulawula ubushushu begumbi ngqo kwigumbi ngokwalo.
Indawo engummelwane ipholile kwaye itofotofo, eyakhiwe ngendlela eqhelekileyo neyithandwa kakhulu yaseDutch 30. Kukho indawo yokumisa ibhasi ekufutshane nendlu eAmsterdam kunye neZaanse Schans. Isikhululo setreyini sikumgama wemizuzu eyi-20 kwaye siyakwazi ukuzibona kwizitrato ezincinci nakwindawo esesixekweni iZaandam, apho zonke iivenkile kunye neevenkile zokutyela zikhoyo. Kukho imarike ebalaseleyo ekumgama wemizuzu emihlanu xa uhamba ngeenyawo ehlangabezana neemfuno zakho zemihla ngemihla.
Ndiyakuthanda ukukunika ezona zinto unokuzonwabela kuhambo. Ndinolwazi oluninzi ngeZaandam, iAmsterdam, kunye nezinye izixeko ezikufutshane kunye neendawo ezikufutshane. Ndiyakuthanda ukuhamba ngokwam, ndiyakuthanda ukubalisa amabali kunye nokwazi iindwendwe zam, ubomi bazo kunye nokuba zivela phi.
Ndiyakuthanda ukukunika ezona zinto unokuzonwabela kuhambo. Ndinolwazi oluninzi ngeZaandam, iAmsterdam, kunye nezinye izixeko ezikufutshane kunye neendawo ezikufutshane. Ndiyakutha…
Inombolo yomthetho: 0479 0440 F0C8 C151 6CC5